Qalabka Iskaashiga Hay'adda: SocialBridge
SocialBridge: Suugaanta Wadashaqeynta ee Hay'adaha
Monday, June 18, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Ha noqoto istiraatiijiyad maskaxeed; maareynta, abaabulka ama wadaagista ololaha suuqgeynta; fulinta mashaariicda; ama si fudud ugu xirnaanta dadka silsiladda oo dhan, iskaashigu waa magaca ciyaarta. Waa maxay dariiqa ka wanaagsan ee loo oggolaan karaa in shaqsi kasta iskiis ugu adeegto feylasha, dukumiintiyada, ama macluumaadka kale ee muhiimka ah ee ay u baahan yihiin iyadoon loo cararin konsol dhexe ama ay ku tiirsanaadaan kuwa kale inay u gudbiyaan macluumaadka?
SocialBridge waxay u oggolaaneysaa dejinta bulshooyin khadka tooska ah looga isticmaali karo khadka tooska ah ee internetka oo loogu talagalay mashruuc kasta ama baahi gaar ah, oo leh xog-ururin iyo foomam, iyo marti-gelinta marin u helka iyo xulashooyinka iskaashiga. Badanaa, qiimaha dhabta ah ee wax soo saarku wuxuu ku qarsoon yahay howlaha caadiga ah. Central Desktops wuu iswada oo sameeya shaqooyinka caadiga ah ee aan xadka lahayn sida cusbooneysiinta, xusuusinta, rukhsadaha gelitaanka iwm.
Shirkaddu waxay bixisaa noocyo kala duwan oo ah SocialBridge. SocialBridge ee hay'adaha waxaa loogu talagalay wakaaladaha hal abuurka iyo kooxaha iskaashi la sameeya macaamiisha inta badan. SocialBridge for Enterprise waxay isu keentaa dhinacyada kala duwan ee ganacsiga, kuna faafaa waqtiga iyo goobta, iyadoo aan lagu tiirsanayn waaxda IT-ga. Xirfadleyda SocialBridge waxay siisaa ganacsiyada yaryar iyo shaqsiyaadka shaqsiyeed wax kasta oo shirkad xirfadlayaal weyni ay adeegsato.
SocialBridge waxay u suurta gelisaa hay'addaada ama hay'addaada ganacsi inay:
Automate hababka amar shaqo
Dib u eeg, faallo ka bixi oo ku ansixi caddaymaha khadka tooska ah
Samee macaamiil iyo mashruuc si deg deg ah adoo adeegsanaya sheybaar diyaarsan
La soco ra'yi celinta macmiilka, go'aannada iyo saxiixyada si looga fogaado khaladaadka qaaliga ah iyo baaxadda baaxadda leh
Soo gal xaaladda mashruuca iyo faylasha khadka tooska ah, wakhti kasta
Fududee wadashaqaynta koox caalami ah oo kala firdhisan, macaamiil, wariyeyaal madaxbanaan iyo wakaalado iskaashi ah
SocialBridge sidoo kale waxay u oggolaaneysaa isdhexgalka saddexaad, wuxuu la yimaadaa heer sare oo nabadgelyo wuxuuna leeyahay 99.98 boqolkiiba waqtigiisa.
Tags: hay'addaMiiska Dhexeiskaashisocialbridge
Maxay Dadku U Qoraan Faallooyinka internetka?